Rianaratra - Wikipedia
Ny rianaratra dia fivoizan’ny lanjan-kerinaratra, anaty zavatra mampita aratra. Ny hery elektrômanetika no manery ireo fivoizana ireo izay foton’ny aratra.
a) Ireo karazan-jaka mampita aratra
Ny vainga metaly, na madio na mifangaro no fantatra fa mpampita aratra. Ny volafotsy no metaly fatra-mpampita aratra avo lenta indrindra. Ny varahina no metaly ampiasaina anaovana tady elektrika ary ny aliominiôma kosa ho an'ny tamba-tady elektrika, noho ny hatsàran'ny fampitàna aratra azo amin'ireo,ary koa noho ny vidin'ireo metaly ireo.Anatin' ireny solosaina avo lenta ireny dia ampisaina ny volamena.
Mikasika ny ranoka indray : ny rano fampiasaintsika andavanandro dia fantatsika fa ilàna fitandremana manokana raha mikijakija aratra isika.
Mitovy ve ny zava-misy anaty vainga metaly sy anaty rano ? Maninona ny vaingan-tsira no tsy mampita aratra kanefa ny ranotsira dia mpampita raindahiny arakaraka ny taha-pahabetsahan'ny sira ao anatiny ?
b) Ny anaty vainga
Tany am-boalohany tamin’ny fihatombohan’ny fanadihadiana ny fivoizan’ny aratra, dia noheverin’ny siantifika fa ny rianaratra dia zavatra manana lanjan’aratra miabo. Taty aoriana, dia noporofoina fa elektrôna izay lanjan’aratra miiba, no mivoivoy anaty metaly ary mahatonga ny fivoivoizan’ny rianaratra.
c) Ny anaty ranoka
Raha izany no misy anaty vainga metaly, ahoana kosa ny anaty ranoka mampita aratra, tahaka ny ranontsira ohatra ? Fivoizan'ny lanjan-kerinaratra, hoy isika ny rianaratra, kanefa ny elektrôna dia tsy "milomano" malalaka anaty ranoka. Ny iôna no hany kiritidraha mitondra lanjan-kerinaratra afaka mihetsika malalaka anatin'ny ranoka raha mampita aratra io ranoka io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rianaratra&oldid=958731"
Dernière modification le 8 Desambra 2018, à 11:33
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2018 amin'ny 11:33 ity pejy ity.